Services - အန်းဒရွိုက်အဘို့သင့်ဘက်ထရီသက်တမ်း APK ကိုဒေါင်းလုပ်များအတွက်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Services - သင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းများအတွက်
Services - သင့်ဘက်ထရီသက်တမ်း APK ကိုများအတွက်
စိုးရိမ်ခြင်းမရှိသောအက်ပ်များမှတစ်ဦး gazillion န်ဆောင်မှုနိုးသင့်ရဲ့ device ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းထားရှိမည်နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့ကို disable လုပ်ဖို့လမ်းမရှိသောရှိသည်ကြောင့်? သင့်ရဲ့ device ကိုညဉ့်နေစဉ်အတွင်းဘက်ထရီသက်တမ်း၏ 50% ကိုဆုံးရှုံးရသောအခါထိုကာလကိုသတိရပါ
ဒါမှမဟုတ်တဲ့အခါမှာ Facebook မှာအဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်များအတွက်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုနှိုးထထားရှိမည်နှင့်သင်က uninstall လုပ်ထက်အခြားသူက fix မရှိနည်းလမ်းရှာ?
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးအသငျသညျအနေဖြင့်သေချာအောင် အမြစ် (ကမဟုတ်ရင်အလုပ်မလုပ်မည်မဟုတ်) ။ သင်က display ကိုပယ်တတ်သည့်အခါအိပ်ခံရမည်တံ့သော apps များကို select နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကို Magic!
သင်တို့သည်လည်းကို disable / အပြီးအပိုင်သင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်မဆိုဝန်ဆောင်မှုကို enable နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ Auto-restart လုပ်လိုက်ပါလေ့နှင့်နိုးသင့်ရဲ့ device ကိုစောင့်ရှောက်သောဝန်ဆောင်မှုများကိုရှိပါက, သို့မဟုတ်သင်-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှအသိပေးချက်များကိုသင်မပို့ဂိမ်းရှိပါက၎င်းသည်အသုံးဝင်သောပါပဲ။
ဒီ app ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒါတာဝန်သိပြုမူအတန်ငယ်အစွမ်းထက်သည်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုဆက်သွယ်ပါလျှင်ငါကိုကူညီပျော်ရွှင်ထက်ပိုမိုပေါ့🙂
ငါ app ကိုမဆိုလုပျထုံးလုပျနညျးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မဆိုအမှားများအတွက်တာဝန်အဘယ်သူမျှမယူပါ။ မည်သည့်မျိုးမရှိသေးပါအာမခံပေးထားရသည်။
1 - အန်းဒရွိုက် Oreo များအတွက်ထောက်ခံမှု Added;
2 - Marshmallow အသစ်တစ်ခုစမ်းသပ်အင်္ဂါရပ် Added သို့မဟုတ်အသစ်များ (တောင်းပန်ပါတယ်ဟာ api က M မတိုင်မီမရရှိနိုင်) အလိုအလျှောက်ပိုင်ခွင့်ကိုချွတ်ပြပြီးနောက်ကို standby mode သို့အားလုံး apps များထားရန်,
3 - ဘာဂ်၏အများကြီး
4 - နယူးအိုင်ကွန်!
Services - သင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းများအတွက်